ကွယ်လွန်သွားတာ (၈)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ချစ်သူလေးအတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် – Nyi Ma Lay
ကွယ်လွန်သွားတာ (၈)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ချစ်သူလေးအတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်
သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင် ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေမှာ ကျရောက် ဇာတ်ရုပ် ကို အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင်ဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင်ဟာ လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ရပ်နား ထားပြီး ကွယ်လွန် သွားတဲ့ ချစ်သူ အတွက် သတိရ တမ်းတရင်း ကိုယ့်စိတ် ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့် နေရ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ် ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီး အတူ မနေရခင် မှာပဲ ချစ်သူက လူ့ လောကကြီး ထဲက နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ သွားတာ မို့ ပိုလို့ ကြေကွဲ နေခဲ့ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာလည်း ညီထွဋ်ခေါင်က သူ့ရဲ့ ဘဝထဲ ကနေ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ သွားတာ (၈) လတိတိ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူ အတွက် ရည်စူးပြီး သံဃာတော် တွေကို ဆွမ်းကပ် ကုသိုလ် ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကို “ဒီနေ့ ၈ လပြည့်ပြီ။ တကယ် မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ လက်ခံ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း…. ရည်စူး ကုသိုလ် ပြုပါတယ် မေ… လွမ်းတယ် …” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ ပါတယ်။
ညီထွဋ်ခေါင် ကတော့ သေကွဲ ကွဲခဲ့ ရပြီ ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူ ကို သတိရ တမ်းတ ရင်းနဲ့ပဲ (၈) လတိတိ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင် တို့ ချစ်သူ နှစ်ဦး ဒီဘဝမှာ စောစော စီးစီး နှုတ်ဆက်ခဲ့ ရ ပေမယ့် နောင်ဘဝ ဆက်တိုင်း မှာ ပေါင်းဖက် နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေး လိုက်ပါ တယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ညီထြဋ္ေခါင္ ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြမွာ က်ေရာက္ ဇာတ္႐ုပ္ ကို အေကာင္းဆုံး နဲ႔ အပီျပင္ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္သူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီထြဋ္ေခါင္ဟာ လက္ရွိ မွာေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို ရပ္နား ထားၿပီး ကြယ္လြန္ သြားတဲ့ ခ်စ္သူ အတြက္ သတိရ တမ္းတရင္း ကိုယ့္စိတ္ ကိုကိုယ္ ႏွစ္သိမ့္ ေနရ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ေရႊလက္တြဲၿပီး အတူ မေနရခင္ မွာပဲ ခ်စ္သူက လူ႔ ေလာကႀကီး ထဲက ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာ သြားတာ မို႔ ပိုလို႔ ေၾကကြဲ ေနခဲ့ ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ မွာလည္း ညီထြဋ္ေခါင္က သူ႔ရဲ့ ဘဝထဲ ကေန ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာ သြားတာ (၈) လတိတိ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူ အတြက္ ရည္စူးၿပီး သံဃာေတာ္ ေတြကို ဆြမ္းကပ္ ကုသိုလ္ ယူခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ကို “ဒီေန႔ ၈ လျပည့္ၿပီ။ တကယ္ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာ လက္ခံ နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း…. ရည္စူး ကုသိုလ္ ျပဳပါတယ္ ေမ… လြမ္းတယ္ …” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ ပါတယ္။
ညီထြဋ္ေခါင္ ကေတာ့ ေသကြဲ ကြဲခဲ့ ရၿပီ ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူ ကို သတိရ တမ္းတ ရင္းနဲ႔ပဲ (၈) လတိတိ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီထြဋ္ေခါင္ တို႔ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦး ဒီဘဝမွာ ေစာေစာ စီးစီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ ရ ေပမယ့္ ေနာင္ဘဝ ဆက္တိုင္း မွာ ေပါင္းဖက္ နိုင္ၾက ပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေပး လိုက္ပါ တယ္ေနာ္
Previous post သူမရဲ့ လက်ကို အိပ်ပျော်နေတာတောင် မလွတ်ဘဲ ကိုင်ထားတဲ့တူလေးကို ဗီဒီယိုလေးခိုးရိုက်ကာ ချပြလိုက်တဲ့ တီတီ ယွန်းနဒီလွင်မိုး
Next post မကြာမီ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ချစ်သူငယ်ချင်းသီရိရှင်းသန့်ကို ပျော်ရွင်စရာပါတီပွဲလေးနဲ့ Surpriseလုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်လေးနွယ်နဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်